Xaalad caafimaad darro oo ka jirta deegaanno hoos taga degmada Balcad | Dusta News
Home > General > Xaalad caafimaad darro oo ka jirta deegaanno hoos taga degmada Balcad
Xaalad caafimaad darro oo ka jirta deegaanno hoos taga degmada Balcad
June 12, 2020 June 12, 2020 Dusta News119Leave a Comment on Xaalad caafimaad darro oo ka jirta deegaanno hoos taga degmada Balcad
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanno hoos taga degmada Balcad ee gobolkaasi ay ka jirto xaalad caafimaad darro.
Ilaa iyo hadda waxaa xaalad caafimaad darro u dhintay ilaa 2 ruux, halka in ku dhawaad 20 ruux oo kale ay la jifaan, xanuuno soo wajahay 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Dadka deegaanka ayaa u sheegay KNN in dadkan u dhintay xanuunka ay ahaayeen dad shacab ahaa, isla markaasina ku noolaa deegaan lagu magacaabo Qoryo Cadde oo ah tuulo yar oo hoos timaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Wasaaradda Caafimaadka ee maamulka Hirshabeelle ayaa la sheegay in aysan gaari karin tuulooyin iyo deegaannada qaar, si ay gargaar caafimaad ugu fidiyaan dadka shacabka ah ee xanuunada kala duwan qaba, maadaama la sheegay in goobahaasi ay inta badan ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Wasiir isku casilay taageerada dawlada oo laga hor istaagay
Gudoomiyaha Golaha shacabka ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Qatar u jooga soomaaliya
Dadka ku dhintay rabshadaha Itoobiya oo gaaray 166 qof
Trump oo digniin u diray Joe Biden